Oovimba beGolide-Funda ukuRhweba
Ixabiso leGolide Lophula i-1,830 ye-$ Resistance, iqala kwakhona i-Utrend eNtsha
Ukuhlaziywa: 20 January 2022
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 1,900, $ 1,950, $ 2000
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 1,750, $ 1, 700, $ 1,650
Igolide (XAUUSD) yexesha elide iTrend: Bullish
Igolide (XAUUSD) ikwintshukumo ephezulu njengoko iphinda iqala ngokutsha. Ixabiso legolide liphula ukuchasana kwi-1,830 yeedola kwaye liqalise kwakhona phezulu. Ukusukela nge-31 kaDisemba, abathengi bebesenza iinzame ezingxamisekileyo zokuphelisa ukuxhathisa. NgoJanuwari 3, kunye noJanuwari 13 abathengi bagxothwa njengoko iGolide yehla ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Nge-19 kaJanuwari, abathengi banendlela yabo njengoko iGolide iphinde yaqala ngokutsha. Okwangoku, ngoJanuwari 13 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba iGolide iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extension okanye i-$ 1,855.27.
I-XAUUSD-Itshathi yemihla ngemihla
IGolide ikwinqanaba lama-63 leSalathiso saMandla aManyanisiweyo kwixesha le-14. Imarike ifikelele kwindawo yomgangatho ophakamileyo kwaye iyakwazi ukuya phezulu. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka. Amaxabiso egolide angaphezulu kwemiyinge ehambayo eyenza kube lula ukunyuka.
Igolide (XAUUSD) phakathi kwexesha eliphakathi: Ukuqaqamba
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso leGolide likwi-uptrend. Ngaphambi kokuba kuqale ukunyusa, iGolide yayikwicala lokuhamba ngaphantsi kwexabiso le-1,830 yeedola. Namhlanje, iinkunzi zenkomo zophule umgangatho wokumelana. Ngelishwa, imarike ifikelele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike.
I-XAUUSD-4 Itshathi yeYure
I-XAUUSD ingaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Imarike ifikelele kwingingqi ethengiwe ngokugqithisileyo. Ukuya phezulu ukuya phezulu kuyathandabuzeka. Abathengisi banokuvela kwindawo ethengiwe kakhulu. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Imbonakalo ngokubanzi yeGolide (XAUUSD)
Ixabiso leGold's (XAUUSD) liphule ukuchasana kwi-1,830 yeedola njengoko liphinda liqala ngokutsha. NgokweStochastic yemihla ngemihla, i-XAUUSD irhweba kwindawo ethengiwe kakhulu yentengiso. Mhlawumbi, ixabiso leGolide liya kuphinda libuyele, kwaye kamva ukunyuka okuphezulu kuya kuphinda kuqalise.
tags igolide, Uhlalutyo Technical, XAUUSD
Igolide iguquguquka ngezantsi kwe-1,830 yeedola zokuchasa ngaphezulu, iMeyi iSlump ukuya kwi-1,800 yeedola ephantsi
Ukuhlaziywa: 14 January 2022
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000
Igolide (XAUUSD) ikwindlela esecaleni kodwa inokuhla iye kwi-$1,800 ephantsi. Igolide ibuyisela umva njengoko ijongene nokukhatywa kwindawo ephezulu ye-1,830 yeedola. Nangona kunjalo, ukuba ixabiso liphula inqanaba lokumelana, imarike iya kunyuka kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ihlawule i-$ 1,860. Okwangoku, ngoJanuwari 14 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba iGolide iya kunyuka kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye i-$ 1,840.86.
IGolide ikwinqanaba lama-55 leSalathiso saMandla aManyanisiweyo sexesha le-14. Imarike ifikelele kwindawo yokunyuka kwaye iphezulu inokwenzeka. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Igolide (XAUUSD) phakathi kwexesha eliphakathi: Ukuhlengahlengiswa
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso leGolide likwindlela esecaleni. Ixabiso legolide liguquguquka ngaphantsi kwe-1,828 ye-overhead resistance. Umkhwa wecala uqhubekile ukususela ngo-Disemba 21. Ngalo lonke ixesha imarike iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ithengise uxinzelelo. I-downtrend yangoku inokuthi inyuke iye kwi-1,804 yeedola ngaphambi kokunyuka.
I-XAUUSD ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Ixabiso leGold's (XAUUSD) liyehla njengoko linokuhla liye kutsho kwi-1,800 yeedola. Imarike iguquguquka ngaphantsi kwe-1,828 yendawo yokuchasana. Ixabiso leGolide liwela phantsi. Ukunyuka okuphezulu kuya kuphinda kuqalise ukuba ixabiso lifumana inkxaso ngaphezu kwe-1,800 yeedola.
Phawula: I-Learn2Trade.com ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo-mali.
IGolide idibanisa Ngaphezu kwe-1,790 yeedola njengoko iMarike ifikelela kwiNgingqi eThengiweyo
Inqanaba lokumelana eliphambilis: $ 1,900, $ 1,950, $ 2000
Igolide (XAUUSD) yexesha elide iTrend: Ukuthwala
Igolide (XAUUSD) ikwimeko ephantsi njengoko imakethi ifikelela kwindawo ethengiswe kakhulu. Ukulungiswa okuphezulu kupheliswe kwi-1,830 yeedola. Uxinzelelo lokuthengisa lwaqala kwakhona emva kwemizamo emibini engaphumelelanga yokuphula i-$ 1,830 yokuchasana. Njengoko ixabiso liqhekeza ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo, i-downtrend inokuqalisa kwakhona. Okwangoku, ngoDisemba 2 downtrend, umzimba wekhandlela uphinde wavavanya i-50% ye-Fibonacci yokubuyisela inqanaba. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba iGolide iya kuwela kwinqanaba le-2.0 ye-Fibonacci extension okanye i-$ 1,637.68.
XAUUSDF – Itshathi yemihla ngemihla
Ixabiso legolide lingaphantsi kwemiyinge ehambayo ebonisa ukuwa okunokwenzeka kweGolide. IGolide ikwinqanaba lama-42 leSalathiso saMandla aManyanisiweyo kwixesha le-14. Imarike ifikelele kwindawo ye-downtrend kwaye iyakwazi ukuhla ngakumbi. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-50 zithambekile ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso leGolide linyuka. Ixabiso lenza uthotho lwezinto eziphakamileyo eziphezulu kunye nezisezantsi eziphezulu ezibonisa ukunyuka. Abathengi bagxothwa kabini njengoko bezama ukuphula ngaphezulu kwenqanaba lokumelana ne-1.830 yeedola. Ngenxa yoko, ixabiso leGolide lehle laya kutsho kwi-1,790 yeedola.
Igolide ingaphantsi koluhlu lwe-20% yestochastic yemihla ngemihla. Ukwaliwa kubangele ukuba ixabiso lehle kummandla othengisiweyo. Oku kuthetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa lufikelele ekuphelelweni kwe-bearish. Abathengi banokuvela kwindawo ethengiswa kakhulu. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Ixabiso leGold's (XAUUSD) likwinyathelo elihlayo njengoko imarike ifikelela kwindawo ethengiswe kakhulu. Njengoko ixabiso liwela kummandla othengisiweyo, uxinzelelo lokuthengisa lunokuphela. Ixabiso lidibanisa ngaphezu kwenqanaba le-$ 1,790 njengoko imarike ifikelela kummandla othengisiweyo.
Igolide (i-XAUUSD) ifikelela kwiNqanaba le-1,818 yeedola, ijongene nokugatywa kwiNgingqi ye-Overbought
Ukuhlaziywa: 31 Disemba 2021
Igolide's (XAUUSD) pirayisi ingaphezulu kwemiyinge ehambayo njengoko ijongene nokukhatywa kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Ngoku, imakethi yophukile ngaphezu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okuthe kratya kwamaxabiso. Xa sibuyela emva, i-downtrend yangaphambili iphelile ngo-Matshi. Ngokutsho kwesixhobo seFibonacci, ixabiso leGolide lawela kwinqanaba eliphantsi le-$ 1,687 elilingana ne-2.0 ye-Fibonacci extension. Nangona kunjalo, emva kwe-downtrend, ixabiso leGolide belikwindlela esecaleni. Imarike ibiguquguquka phakathi kwe-1,680 yeedola kunye ne-1,920 yeedola. Namhlanje, ixabiso leGolide lithengisa kwi-1,816 yeedola ngexesha lokushicilela. I-uptrend yangoku inokujongana nokukhatywa kwi-1,920 yeedola.
XUUSD – Itshathi yeVeki
UkuFunda kweZalathi zeTshati yeVeki:
Ixabiso legolide lingaphezulu komgca we-21 weentsuku ze-SMA kunye ne-50-day line SMA ebonisa ukunyuka okunokwenzeka kweGolide. Ixabiso legolide linyuke laya kwinqanaba le-53 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-XAUUSD ikwindawo ye-uptrend kwaye ingaphezulu kwe-centerline 50. I-avareji ehambayo ihlahlela ngokuthe tye ebonisa indlela yecala.
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso leGolide likwi-uptrend. Ixabiso liphule ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. Okwangoku, nge-29 kaDisemba uptrend, umzimba wekhandlela ofunyenweyo wavavanya i-50% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba iGolide iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-$ 1,820.77. Ukususela kwisenzo sexabiso, imarike ifikelele kwingingqi ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike.
I-XAUUSD ingaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Inyukele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Ixabiso leGolide kusenokwenzeka ukuba liwe. Ngamanye amazwi, abathengisi baya kuvela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike ukutyhala amaxabiso ezantsi. Umyinge weentsuku ezingama-21 kunye ne-avareji yeentsuku ezingama-50 zihla zinyuka.
Ixabiso leGold's (XAUUSD) likwinqanaba eliphezulu njengoko lijongene nokukhatywa kwindawo ethengwe kakhulu. I-uptrend ifikelele kwingingqi ethengiwe kakhulu kwimarike. Imarike inyuke yaya kutsho kwi-1,817 yeedola. Ukuba ijongene nokukhatywa; imarike iya kuhla ukuya ezantsi $1,799.
Igolide (i-XAUUSD) ibambekile kuluhlu, ijongene nokugatywa kwi-1,800 yeedola.
Ukuhlaziywa: 24 Disemba 2021
Igolide's (XAUUSD) ixabiso lingaphezulu kwemiyinge ehambayo kodwa ijongene nokukhatywa kwi-1,800 yeedola. Imarike kufuneka inyuke njengoko amaxabiso engaphezulu komndilili ohambahambayo. Iinkunzi kusafuneka zigcine ixabiso lingaphezulu kwemiyinge ehambayo. Ukususela ngoJulayi, abathengi baye basilela ukugcina isantya se-bullish ngaphezu kwe-1,800 yezinga lokumelana. Ngokwestochastic yemihla ngemihla, iGolide irhweba kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike. Ke ngoko ukunyuka kwangoku kunokujongana nokwaliwa ukuya kwicala elisezantsi.
Ixabiso legolide liye laphakama kwinqanaba le-56 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-XAUUSD isendaweni ye-uptrend kwaye ingaphezulu kwe-centerline 50. Iyakwazi ukunyuka. Imiyinge eshukumayo ithambekele ngokuthe tye ibonisa indlela esecaleni. Ixabiso legolide lingaphezulu kwemiyinge ehambayo ebonisa ukunyuka okunokwenzeka kweGolide.
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso leGolide likuluhlu oluya kuluhlu. Ukususela nge-23 kaNovemba, imarike iguquguquka phakathi kwe-$ 1,760 kunye ne-$ 1,800. Ukususela ngoJulayi, iinkunzi zeenkomo azizange ziphule ngaphezu kwe-1,800 yezinga lokumelana. Ngendlela efanayo, ukususela ngoNovemba 23, iinkunzi zeenkomo zikhusela inkxaso ye-1,760 yeedola. Ixabiso legolide liza kuphinda liqalise ukuthambekela xa amanqanaba oluhlu aphulwayo. Imarike iya kuba nokunyakaza okukhawulezileyo ukuba i-$ 1,800 yokuchasana iyaphulwa, Imarike iya kukhwela i-$ 1,860 ephezulu.
Imarike isengaphezulu kwe-80% uluhlu lwestochastic yemihla ngemihla. Inyukele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Ixabiso leGolide kunokwenzeka ukuba libuyise okanye liwe. Ngamanye amazwi, abathengisi baya kuvela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike ukutyhala amaxabiso ezantsi.
I-Gold's (XAUUSD) ibirhweba ngendlela esecaleni ukusuka ngoNovemba kodwa ijongene nokukhatywa kwi-1,800 yeedola. Ixabiso lizinzile njengoko liguquguquka phakathi kwe-$ 1,760 kunye ne-$ 1,800. Okwangoku, iGolide kusenokwenzeka ukuba iwe njengoko ifikelela kwindawo ethengwe kakhulu kwintengiso.
IGolide (XAUUSD) Ibuyisela iNxaso ngaphezulu kwe-1,760 yeedola, iJonga i-1,860 yeedola eziPhezulu
Ukuhlaziywa: 17 Disemba 2021
Inqanaba lenkxaso engundoqos: $ 1,750, $ 1, 700, $ 1,650
Igolide (XAUUSD) ixabiso laphule ngaphezu kwe-avareji ezihambayo. I-uptrend iya kuphinda iqalise ukuba isantya se-bullish sigcinwa. Emva kokuchithwa kwe-23 kaNovemba, ixabiso leGolide lidibanise ngaphezu kwenkxaso ye-1,760 yeedola. Ngomhla we-15 kaDisemba, ixabiso libuyele ngaphezu kwenkxaso yangoku ebonisa ukunyuka kwangoku. I-uptrend iya kujongana nokuchasana kwi-1,820 yeedola. Ixabiso leGolide liza kukhwela kwi-1,860 yeedola ukuba abathengi bayoyise ukuchasana kokuqala.
Nge-uptrend yangoku, iGolide ikwinqanaba le-53 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-XAUUSD ikwindawo ephakamileyo kunye ne-centerline 50. Iyakwazi ukunyuka. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-50 zithambekile ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni. Ixabiso legolide lingaphezulu kwemiyinge ehambayo eya kwenza ukuba iphakame.
Igolide (XAUUSD) phakathi kwexesha eliphakathi: Ukuthwala
Kwitshathi yeyure ye-1, ixabiso leGolide likwi-uptrend. Ixabiso leGolide liphule ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. I-uptrend yangoku ifikelele kwingingqi ethengiwe kakhulu kwimarike. Okwangoku, ngoDisemba 16 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6 % yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba iGolide iya kunyuka kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye i-$ 1,797.22. Ukususela kwisenzo sexabiso, imarike iphakame ngaphezu kwezinga leFibonacci.
I-XAUUSD-1 Itshathi yeYure
Ixabiso legolide lingaphezulu kwama-80% uluhlu lwestochastic yemihla ngemihla. Imarike inyukele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Ixabiso leGolide kunokwenzeka ukuba libuyise okanye liwe. Ngamanye amazwi, abathengisi baya kuvela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike ukutyhala amaxabiso ezantsi.
Ixabiso leGold's (XAUUSD) ngoku likwi-uptrend. Imakethi inokuthi iphinde iphinde ibuyele phezulu kwi-1,860 yeedola. Nangona kunjalo, i-uptrend inokujongana nokukhatywa.
Igolide (XAUUSD) Idibanisa ngaphezu kwe-$ 1,762 Inkxaso njengoko iinkunzi zeBulls ziphinde ziqalise i-Upside Momentum
Ukuhlaziywa: 10 Disemba 2021
Igolide (XAUUSD) iye yadibanisa ngaphezu kwinqanaba le-$ 1761 inkxaso ukususela ngoDisemba 2. I-downtrend yangoku ifikelele ekuphelelweni kwe-bearish. Igolide iwele kwindawo ethengisiweyo kakhulu kwimarike. Abathengi banokuvela banyuse amaxabiso phezulu. Ngaphandle koko, iGolide inokuphinda ibuyele ngaphezulu kwenkxaso yangoku ukuze iphinde inyukele phezulu. Isenzo sexabiso sibonakaliswa ngamakhandlela amancinci omzimba abizwa ngokuba yiDoji. Oku kwenza ukuba ukuhamba kwexabiso kube ngumda.
DItshathi yeeMpawu Ukufunda:
IGolide ikwinqanaba lama-43 leSalathiso saMandla aManyanisiweyo kwixesha le-14. Imarike ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kombindi we-50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-50 zithambekile ngokuthe tye ebonisa indlela esecaleni. Ixabiso legolide lingaphantsi kwemiyinge ehambayo eyenza kube lula ukuwa.
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso leGolide likwinyathelo elihlayo. Imarike sele inqabile ukuya kutsho kwi-1,762 yeedola ezisezantsi njengoko iinkunzi zithenge iidiphu. Abathengi batyhala iGolide ukuya phezulu kwi-1.792 yeedola ezitsala uxinzelelo lokuthengisa. Okwangoku, ngoDisemba 8 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-Fibonacci ye-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba iGolide iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extension okanye i-$ 1,772.01.
Ixabiso legolide lingaphezulu kwama-25% uluhlu lwestochastic yemihla ngemihla. Imakethi iphinde yaqala ukusebenza ngokunyukayo. Abathengi bazama ukunyusa amaxabiso phezulu.
Ixabiso leGold's (XAUUSD) lidibanisa ngaphezu kwenkxaso ye-1,762 yeedola. Igolide ifikelele ekuphelelweni amandla. Kukho ithuba lokuba iGolide iya kuphinda ibuyele ngaphezu kwenkxaso yangoku.
Igolide (XAUUSD) Ifikelela kwi-$ 1,762 ephantsi njengoko iiBulls ziphinde ziqalise i-Uptrend
Ukuhlaziywa: 3 Disemba 2021
Igolide (XAUUSD) ikwintshukumo ehlayo njengoko ixabiso lehla ngaphantsi komndilili ohambayo. Iintshukumo ezithe kratya eziya ezantsi zilindeleke njengoko kuhla kwamaxabiso ngaphantsi kwemiyinge ehambayo. Igolide iwile kwinqanaba eliphantsi le-$ 1762 elingaphantsi kwe-Oktobha 18 kunye noNovemba 3. Imarike iya kuqalisa phezulu ukuba inkxaso yangoku ibambe. Ukuphinda kuqwalaselwe kwinqanaba le-1,820 yeedola kunokwenzeka. Ngaphandle koko, ixabiso leGolide liya kuwela kwi-21 kaSeptemba ephantsi ye-1,721 yeedola.
Igolide ikwinqanaba le-39 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-XAUUSD ngoku ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Ixabiso legolide lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezenza ukuba zikwazi ukuwa. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-50 zithambekile ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso leGolide likwinyathelo elihlayo. Ukususela ngoNovemba 23 downtrend, imarike iye yathengisa ngaphantsi kwe-1,800 yezinga lokumelana. Ngeli xesha, nge-2 kaDisemba, ixabiso leGolide lehla laya kutsho kwi-1,762 yeedola eliphantsi njengoko iinkunzi zenkomo zazithenga iidiphu. Okwangoku, ngoNovemba 28 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6 % yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba iGolide iya kuwela kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye i-$ 1,740.98.
Igolide ingaphantsi koluhlu lwe-20% yestochastic yemihla ngemihla. Igolide iwele kwindawo ethengisiweyo kakhulu kwimarike. Abathengi bazama ukulinyusa ixabiso.
Ngomhla we-2 kaDisemba, i-Gold's (XAUUSD) yawa kwaye yaphinda yahlaziywa i-1,762 yangaphambili ephantsi. Ngomhla we-3 kaNovemba, ixabiso leGolide libuyele ngaphezu kwe-$ 1,762 inkxaso yokufikelela phezulu kwi-1,880 yeedola. Namhlanje, ukunyuka kwaphezulu kuphinde kwaqala.
Igolide (XAUUSD) ikwi-Downtrend njengoko abathengisi besoyikisa ngoMfutshane
Ukuhlaziywa: 25 Novemba 2021
Igolide (XAUUSD) ikwintshukumo ezantsi. Ngomhla we-16 kaNovemba, i-XAUUSD yadibana ne-$ 1,877 ephezulu. Abathengi abakwazanga ukugcina amandla e-bullish njengoko imarike ifikelele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Igolide yakhatywa ukusuka phezulu yakutshanje njengoko imarike yehla ngokukhawuleza ukuya kwinqanaba eliphantsi le-1782. Okwangoku, ixabiso leGolide lingaphezulu komgca we-50 weentsuku ze-SMA kodwa ngaphantsi kwe-SMA yeentsuku ezingama-21. Ukuba inkxaso yomgca weentsuku ze-50 ibambe, iGolide iya kuba ngumyinge phakathi kwee-avareji ezihambayo.
Igolide ikwinqanaba le-42 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-XAUUSD ngoku ikwindawo ephantsi kwe-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Ixabiso legolide liphakathi kwee-avareji ezihambayo eziza kubangela ukuhamba-hamba phambili kwinkxaso yangoku. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-50 zithambekile ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso leGolide likwinyathelo elihlayo. I-downtrend ifikelele ekuphelelweni kwe-bearish. Okwangoku, ngoNovemba 16 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-38.2 % yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba iGolide iya kuwela kwinqanaba le-2.618 isandiso seFibonacci okanye i-$ 1,802.08. Ukususela kwisenzo sexabiso, imarike yehlile ukuya kwinqanaba le-1778 kwaye yaqala ukuhlanganisa.
Igolide ingaphezulu koluhlu lwe-40% yestochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Igolide's (XAUUSD) ikwintshukumo ezantsi. Kwiveki edlulileyo, ixabiso leGolide lidibanise ngaphezu kwezinga le-1778. I-downtrend ifikelele ekuphelelweni kwe-bearish njengoko ixabiso libamba ngaphezu kwexabiso eliphantsi.
IGolide (XAUUSD) Iqala kwakhona i-Uptrend njengoko iRally ngaphezu kwe-1,820 yeedola
Ukuhlaziywa: 12 Novemba 2021
Igolide (XAUUSD) iphindela ngaphezulu kwenqanaba le-1760 njengoko ixabiso lekhefu lingaphezulu komyinge ohambayo. Ixabiso legolide liphinda liphule ngaphezu kokuchasana kwi-1,820 yeedola. XAUUSD iphumile kwisilungiso esisezantsi. Abathengi bakwi-advanteji yokutyhala isalathisi kwindawo ephezulu. Imarike kulindeleke ukuba ifikelele phezulu kwi-1,900 yeedola. Ukunyuka okuya phezulu kuyathandabuzeka njengoko iGolide isondela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zihla zinyuka zibonisa indlela yokunyuka. IGolide ikwinqanaba lama-68 leSalathiso saMandla aNxulumanayo sexesha le-14. Imarike isondela kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Igolide ayinayo indawo eyaneleyo yokuhlangana phezulu. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwemiyinge ehambayo ebonisa ukunyuka okunokwenzeka kweGolide.
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso leGolide likwinyathelo eliya phezulu njengoko ixabiso lophuka ngaphezu kwemiyinge ehambayo. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokukhatywa kwi-1,870 yeedola. Ukusukela nge-10 kaNovemba, i-uptrend imisiwe. Imarike iya kuphinda iqalise ukuya phezulu ukuba ukuchasana kwangoku kwaphulwa. Okwangoku, ngoNovemba 9 uptrend; umzimba ikhandlela retraceed ivavanywe 50 % inqanaba Fibonacci retracement. Ukubuyiswa kubonisa ukuba iGolide iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye i-$ 1,911.95.
Isalathisi seeyure ezingama-1 Ukufunda
Igolide ingaphantsi koluhlu lwe-60% yestochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwimo ye-bearish. I-uptrend iya kuphinda iqalise ukuba ixabiso lifumana inkxaso ngaphezu kwe-21-day SMA. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Ixabiso leGold's (XAUUSD) liqalise kwakhona ukunyuka kwalo. Iinkunzi zenkomo ziye zaphula i-1,820 ukuchasana njengoko imarike isondela kwi-high yangaphambili ye-1,900 yeedola. Igolide ijongene nokuchasana njengoko imarike isondela kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo.
← Entsha izithuba1 2 ... 21 abaDala izithuba →